MR MRT: Buddhist Blessing - ပရိတ်မေတ္တာ
Buddhist Blessing - ပရိတ်မေတ္တာ
သစ္စာအလင်း July 9, 2011 at 2:37 AM
အရှင်ဘုရား Blessing ပေးတာ ပန်းလေးနဲ့ ဆိုတော့ မဆိုးဘူး။ပရီတ်ရေက Volumetric Cup နဲ့ဆိုတော့ နည်းနည်းသိပ္ပံဆန်နေသလားလို့..တပည့်တော်ထင်တာပါ။ဖလားလေး နဲ့ဆို ပိုကောင်းမလားပဲ။ ထိုင်းမှာတော့ အဲဒီ ဗီဒီယို ထဲက လိုပဲ ဘုန်းကြီး တိုင်းလိုလို မှာအုန်းတံပြက်စည်း အသေးစားလိုလေးဆောင်ထားကြတာ...ပြီးရင် ရေတွေ နှစ်နှစ်ဖြန်းတော့တာ..။ အဲလိုလုပ်တိုင်း အုန်းတံပြက်စည်း ကိုသတိရနေမိတဲ့ စိတ်ကိုဖျောက်ထားရတယ်ဘုရား။
Ashin Acara. July 9, 2011 at 3:02 AM
Flowery and scientific. :)